Xulka Qurbo Magazine: Ganacsiga & Horumarinta Bulshada - Daryeel Magazine
Xulka Qurbo Magazine: Ganacsiga & Horumarinta Bulshada
Haddii la isku dayo in hal ama laba erey lagu soo koobo xilka ganacsiga ka saaran bulshada, malaha waxa habboon in aan adeegsanno labada erey ee aadka looga yaqaan dunida maamulka iyo maareynta afka qalaadna ku noqonaya ‘Corporate Responsibility’, oo macneheedu yahay ‘ xilka shirkadda ama ganacsiga.’
Waa erey koobsanaya fal kasta oo ganacsigu u qaado dhanka horumarinta bulshada iyo kobcinta ama tayeynta nolosha dadweynaha. Nasiib darro, maanta haddii aad dalkeenna indha-indheyso, ma heli kartid, ama waa uu yar yahay, hadiiba uu jiro’e, ganacsi ama ganacsade u heellan horumarinta bulshadeenna oo aan la koobi karin baahiyaha ka dhex jira. Waa ay adag tahay in aad hesho ganacsade aan ku fikirin oo keli ah sidii uu u sameyn lahaa faaido, ee sida oo kale daneynaya bulshada iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka jira, horumar waarana loogu soo dabbaali lahaa bulshada. Ganacsigii waxa uu noqday dhiigmiirasho ganacsadihiina waxa uu ku dedaalayaa shilin kasta oo ay dadku haystaan sidii uu u heli lahaa. Marna kama damqanayo baahida jirta, kumana tashan in haddii bulshadu sidaa ku sii jirto, in ay baabi’i doonto, baahidu badan doonto, ganacsiguna suuqa ka bixi doono.
Markii ay arrini halkaa marayso, waxa aad garan kartaa in ganacsigii dhaafay xayn-daabka damiir soo jeeda, hab-dhaqan suubban iyo qalbi qoyan. Waxa uu in yar u jiraa, haddii aanuu la mid ahaynba, in uu xaaraan noqdo oo bakhtiga waxba dhaami waayo. Haddii aad u fiirfiirsato baahiyaha jira, waxa aad ogaan kartaa in ay badan yihiin, baahi kasta oo jirtana waa mid xil ka saaran yahay ganacsatada. Waddooyinka oo burbursan, maktabadaha wax lagu akhristo oo aan jirin, haddii ay jiraanna aad u tayo daran, dugsiyada iyo jaamacadaha oo aan aad u qalabeysneyn, iyo qaar kale oo badan ayaa ah baahiyo wax-ka-qabashadoodu sugeyso ganacsatada. Wax ka qabashada arrimahan maaha mid iyaga oo keli ah saaran, waana in loo wada guntado sidii wax looga qaban lahaa, ganacsataduse waa in ay baal dahab ah ka qaadato hindiseyaasha noocan oo kale ah ee ku qotoma sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka bulshada haysta.
Intaa waxa ka daran, bulshadii oo ka aamustay ka hadalka wixii dantooda ah. Sida ay u nool yihiin maanta waxa ay ka dhigan tahay sidii oo wax dhib ahi aaney jirin. Waxa ay ku qanceen xaalku sida uu yahay, xataa haddii cidi uun isku daydo in ay dhibaatooyinkan soo bandhigto, ama xal u hesho oo is beddel raadiso, waxa ay kala horyimaaddaan iska-caabbin. Fursad kasta oo is beddel waxa ay ku eegaan indho shaki leh. Ma oga waxa ay xaq ay u leeyihiin iyo wixii loogu leeyahay. Waxa ay ku heshiiyeen amusnaan. Halgamaagii Maraykan ee u dhaqdhaqaaqi jirey sinnaanta bulsho Maartin Luutar King baa isaga oo ka hadlaya xaaladdan oo kale waxa uu leeyahay, ” Nolosheennu waxa ay dhammaaneysaa marka aan ka aamusno arrimaha ina khuseeya.” Waa ereyo run ah, una baahan in si fiican loo dhuuxo. Ma aha in bulshadu ka aamusto wixii dantooda ah iyo wixii dhib jira ee u baahan in xal loo raadiyo. Waa in la xisaabtamo, wixii qalloocan la toosiyo, wixii toosan la adkaysto, wixii maqanna la saadaalin karo intii la karo qorshena lagu hawl galo.
Ugu dambeyn, waxa ganacsatada la gudboon, in ay u naxaan bulshadooda, iskuna dayaan in ay horumariyaan, dhibaatooyinka haystana la xallilaan.Bulshadu waa in ay ka toosto hurdada dheer, lana xisaabtanto ganacsatada iyo dawladda. Bulshadu waa in ay dareento culayskay ay leedahay una adeegsataa qaab ka tarjumaya xaqiijinta danaha guud. Ganacsatadu waa in ay ku dedaalaan wax ka qabashada arrimahan hoos ku xusan kuna darsadaan hawl-qabadkooda:
1. Sameynta dugsiyo, goobaha cibaadada, goobaha caafimaadka, meelaha lagu nasto, ceelasha, i.w.m
2. Daryeelidda agoomaha iyo darbi-jiifka,
3. Dhisidda goobaha akhriska, goobaha jimicsiga, garoomada, i.w.m,
4. Sameynta adeegyo jaban oo Internetka ah oo ka caawiya ardayda cilmi-baadhista,
5. Maalgelinta iyo kobcinta xarumaha cilmi-baadhista,
6. Tayeynta iyo qalabeynta jaamacadaha,
7. Kor-u qaadidda shaqaaleynta ardayda ka qalinjebisa jaamacadaha.
Cabdiladiif Cismaan Caabi
Isu-naxariisashada iyo Saamaynta Wanaagsan ee ay ku Leedahay Bulshada 10 Caado Oo Qofka Joogteeya Ka Caawiya Inuu Kasbado Qalbiyada Dadka Ku Xeeran & Bulshada Ma Jeceshahay Naftaada iyo Ehelkaaga?